Sidee Loogu Soo Degsadaa Youtube Fiidiyowga Taleefankaaga gacanta? ➡️ Raacayaasha ▷ ➡️
Sidee looga soo degsadaa fiidiyowyada YouTube-ka taleefankaaga gacanta?
Waxaa laga yaabaa 6, 2021 0 comments 470
Waxaa si dhib leh jira madal video geeyo bixiya tayada YouTube. Tani waa laga yaabaa mid ka mid ah bogagga ay ugu jecel yihiin dadweynaha waqtigaas oo si bilaash ah loogu heli karo waxyaabaha ku saabsan maqalka. Maqaalkeenna maanta waxaan ku bari doonaa sida tooska ah looga soo degsado fiidiyowyada YouTube-ka taleefankaaga gacanta.
Ma jeceshahay fiidiyow YouTube ah oo aad rabto inaad soo dejiso? Waxaa jira siyaabo badan oo loo sameeyo midkoodna waa iyada oo loo marayo aaladaha gacanta. Nidaamku waa mid fudud oo waad soo dejisan kartaa fiidiyoo kasta oo lagu dhajiyay bartaan la aqoonsan yahay.
Ku soo degsashada fiidiyowyada moobaylkaaga waa mid aad u fudud
Haddii aad jeceshahay fiidiyow YouTube ah oo aad jeclaan lahayd inaad ku keydiso taleefankaaga gacanta waxaad haysataa dhowr beddelaad oo aad ku sameyso. Waqtigan xaadirka ah waxaa jira bogag badan iyo codsiyo kuu oggolaanaya inaad kala soo baxdo waxyaabaha ka soo baxa barnaamijkan fiidiyoowga ah ee caanka ah.
Inta badan bogaggan waxaa lagu gartaa inay yihiin bilaash oo si fudud loo heli karo, sidaa darteed waxyaabaha laga soo dajiyo YouTube-ka aad ayey u sahlanaan doontaa. Waxa ugu horreeya ee ay tahay inaan ogaanno waa taas waxaa jira siyaabo badan oo looga soo dejisan karo fiidiyowyadan barnaamijkan.
Mid ka mid ah siyaabaha ugu wax ku oolka ah waa in si toos ah looga sameeyo codsiga rasmiga ah ee YouTubeSi kastaba ha noqotee, adeegsadayaashu waa inay ka mid noqdaan nooca Premium si ay awood ugu yeeshaan soo dejinta waxyaabaha la soo dejinayo. Laakiin sidoo kale waxaa jira ikhtiyaarro kale oo bilaash ah oo aad ku samayn karto fiidiyow YouTube ah oo ku dhammaanaya mobilkaaga.
Kala soo bax fiidiyowyada barnaamijka Youtube
Codsiga rasmiga ah ee YouTube wuxuu ku darayaa ikhtiyaarka lagu soo dejisan karo fiidiyow kasta sudhay madal la yidhi. Xaddidaadda kaliya ee keydinta feylasha sidan ayaa ah inaan u baahan doonno arjiga si aan u awoodno inaan u fiirsano fiidiyowga aan soo dejisannay, haa, muhiim ma aha in lagu xirnaado internetka.
Kuwani waa tillaabooyinka fudud ee ay tahay inaad raacdo si toos ah looga soo dejisto fiidiyowyada Youtube barnaamijka moobiilka:
Furan barnaamijka Youtube ee mobilkaaga
Xullo fiidiyowga aad rabto inaad ku soo dejiso taleefankaaga gacanta
Qeybta hoose ee shaashadda waxaad ku arki doontaa dhowr ikhtiyaar oo aad geli karto, oo ay ku jiraan xulashada "download”(Icon fallaadh hoos u fiiqaysa)
dhagsii badhankaas si aad ugu bilowdo soo dejinta fiidiyaha taleefankaaga gacanta
Fiidiyowga waa la soo dejiyey isla barnaamijka YouTube-ka ah. Hadda waad arki kartaa markasta oo aad rabto, xitaa internetka la'aan. Waxa kaliya ayaa ah inaadan haysan ikhtiyaar aad kula wadaagto barnaamijyada kale.
Ku soo dejiso fiidiyowyada bogag kale
Laakiin haddii waxa aad rabto ay tahay inaad fiidiyowga si buuxda gacanta ugu hayso oo aad la wadaagto cidda aad rabto, waad kari kartaa macangag ka dhigto mid ka mid ah boggan soo dejinta gaarka ah Waxyaabaha ku jira YouTube.
Shabakadda waxaan ka helnaa a liistada ballaaran ee boggaga iyo barnaamijyada kuu oggolaanaya inaad kala soo baxdo fiidiyow kasta YouTube-ka taleefannadeennaxitaa xallin sare. Waxa kaliya ee aad u baahan tahay waa:
Furan biraawsarka mobilkaaga
gasho mid ka mid ah boggan soo degsashada ah
Nuqul xiriirka fiidiyowga Youtube ee aad rabto inaad soo dejiso
Si aad u saarto xiriiriyaha bogga aad dooratay
Guji “download”Xullo qaabka aad rabto inaad u soo dejiso faylka (qaabka, tayada)
1 Ku soo degsashada fiidiyowyada moobaylkaaga waa mid aad u fudud
2 Kala soo bax fiidiyowyada barnaamijka Youtube
3 Ku soo dejiso fiidiyowyada bogag kale
Sidee loo sameeyaa kaararka ganacsiga barta Instagram?
Sideen ugu bedelaa magaceyga adeegsade Twitch?